I-Electromagnetic Induction Sealer ye-Aluminium Foil Sealing
Ikhaya / Umshini Wokufaka Induction / Induction Sealer
Isigaba: Umshini Wokufaka Induction Tags: umshini wokufaka uphawu lwe-aluminium foil, okuzenzakalelayo induction sealer, uphawu lokungeniswa kwamabhodlela, thenga uphawu lokungeniswa, i-cap induction sealer, cap sealer umshini, cap ukubekwa uphawu umshini, okufaka uphawu okuqhubekayo, uphawu lokungeniswa ngogesi, umshini wokufaka uphawu we-electromagnetic, i-enercon induction sealer, ukushisa induction, induction cap sealer, umshini wokufaka uphawu wokufaka, lokungeniswa ucwecwe sealer, intengo ye-induction sealer, induction sealer, intengo yokufaka induction, lokufakwa uphawu, umshini wokufaka uphawu wokufaka
I-Aluminium Foil Electromagnetic Induction Sealer
Uyini “umshini wokufaka uphawu we-aluminium foil”?
Isembozo sokungeniswa kwe-Electromagnetic isetshenziselwa i-PP, i-PE, i-PET, i-PS, i-ABS, i-HDPE, i-LDPE namabhodlela engilazi, esebenzisa isimiso se-electromagnetic ukukhiqiza ukushisa okuphezulu okusheshayo ukuze kuncibilike ucwecwe lwe-aluminium olunamathela ekuvulekeni kwamabhodlela, kufinyelele enhlosweni yobufakazi obumanzi , ubufakazi bokuvuza, ubufakazi besikhutha nokwelula isikhathi sokulondolozwa.
Uhlobo olujwayelekile lwophawu lwangaphakathi luyizingcezu ezi-2 zangaphakathi ezishiya uphawu lwesibili ngaphakathi kwamakepisi uma sekususwe uphawu lokungeniswa. Lokhu kusetshenziswa kakhulu lapho izindaba zokuvuza ziyinkinga. Enye indlela iwuphawu olulodwa lwangaphakathi oluyisigaxa lapho kususwe uphawu lokungeniswa akukho liner esele lapho kuvalwa khona. Ungakhetha futhi kwizimpawu ezine-pulltab noma lezo ezinophawu olucwebekayo olungashiyi nsalela ebhodleleni. Kufanele uqiniseke ukuthi i-liner iyahambisana nezinto zebhodlela.
imodeli 2500W 1800W 1300W
Umkhiqizo Material Insimbi engagqwali
Uphawu Ububanzi 60-180mm 50-120mm 15-60mm
Speed ​​ukubekwa uphawu Amabhodlela we-20-300 / iminithi
Ijubane Lokudlulisa 0-12.5m / min
Uphawu Ukuphakama 20-280mm 20-180mm
I-Max Power 2500W 1800W 1300W
Input Voltage Isigaba esisodwa, 220V, 50 / 60Hz
Izinto ezisebenzayo I-PP, i-PE, i-PET, i-PS, i-ABS, i-HDPE, i-LDPE namabhodlela engilazi, ibhodlela lePlastiki lomlomo we-aluminium film
Ubungako (L * W * H): 1005 * 440 * 390mm 970 * 515 * 475mm
Isisindo 72kg 51kg 38kg
Kuyini ukubekwa uphawu kwe-Induction?
Ukufaka uphawu kuyindlela engeyona yokuxhumana yezinto zokubopha ezenziwe ngama-thermoplastics ngokungeniswa kwe-electromagnetic okwenza imisinga ye-eddy ukushisa izinto. Emkhakheni wokupakisha, le nqubo isetshenziselwa ukuqinisa uphawu lwesiqukathi esine-foil laminate evikeleka ngokushisa. Endabeni yemishini yethu ye-Aluminium Foil Induction Sealer, i-foil laminate iyi-liner ye-aluminium induction liner.
Le mishini yokupakisha isetshenziselwa ukuvala ingilazi neziqukathi zepulasitiki ngokufakwa uphawu kokufakwa ukuze kwandiswe impilo yeshalofu lomkhiqizo, ukuvimbela ukuvuza, futhi ikakhulukazi ukuhlinzeka ngezimpawu ezibonakala ziphazamisekile. Ukungeniswa kwe-aluminium foil kungenza ukuthi imishini yokuthunga itholakale ngogesi, amandla aphathwayo, kanye nemiklamo yezandla yokufaka uphawu osayizi abahlukahlukene bokuvalwa.
Iyini i-Aluminium Heat Induction Liner?
Uke wazibona lezi zinto zimboza iziqukathi zamabhodlela nezimbiza lapho uvula umkhiqizo ohlanganisiwe onjengebhotela lamantongomane noma imithi yamabhodlela. I-aluminium induction liner liner is a foil yesiliva lapho kuvulwa isitsha esifakazela ukuthi umkhiqizo ohlanganisiwe uyabonakala. Zidinga ukufakwa kwe-aluminium foil kungavala imishini ukuvala kahle lawa ma-liners ekanini.
Ngaphezu kwalokho, i-liner ejwayelekile yokufakwa kwe-aluminium yokufaka ngaphakathi kukaphawu luyisigaxa esinemigqa eminingi esakhiwe yilezi zingqimba ezilandelayo ezakhiwe ngobuchule nezenzelwe zona:
Isendlalelo se-pulp paperboard
Isendlalelo se-aluminium foil
Isendlalelo esiphakeme kakhulu, okuyisendlalelo sepulp paperboard, sidleke ngokumelene nengxenye engaphakathi yesembozo futhi sinamathiselwe kuso. Kulandelwe ungqimba we-wax osetshenziselwa ukubopha ungqimba lwe-pulp paperboard kusendlalelo sesithathu, ucwecwe lwe-aluminium, okuyisendlalelo esinamathela esitsheni. Isendlalelo sokugcina ezansi ungqimba lwe-polymer olubukeka njengefilimu epulasitiki.
Lezi zingqimba ezine zisebenza ndawonye ukufeza amandla adingekayo enqubo yokuphumelela yokungenisa ukuze kukhiqizwe uphawu olungenamoya.
Izicelo Zokufaka Induction
I-HLQ i-aluminium foil imishini yokufaka uphawu ama-screw caps alungele ukufaka uphawu kokudla, iziphuzo, imikhiqizo yezokwelapha, nezimonyo phakathi kokunye ngezindlela ezahlukahlukene zamabhodlela, njengamabhodlela ayindilinga nayisikwele, enziwe ngepulasitiki.
Ngaphezu kwalokho, ngezansi kunezimboni nemikhiqizo eyahlukahlukene i-LPE engakwazi ukuhambisa imishini.
Imboni Yeziphuzo Iwayini, ubhiya okheniwe, i-Soda, amanzi, i-Cider, iJusi, ikhofi netiye, iziphuzo ezinekhabhoni
Imboni Ukudla Inyama, Ukudla Kwasolwandle, Imifino, Izithelo, I-Sauce, Ijamu, I-Tuna, Isobho, Insangu, Uju, I-Nutrition Powder, Ukudla Okomile (njengamantongomane, okusanhlamvu, irayisi, njll.)
Umkhakha Wezemithi Izimpahla zezilwane, izimpahla zezokwelapha, izimpushana, amaphilisi, izinto zokusetshenziswa zemithi
Amakhemikhali Amafutha okupheka, uwoyela weLube, iGlue, Upende, amakhemikhali asePulazini, okokuhlanza uketshezi, i-Ink nama-lacquers, imfucumfucu yeNyukliya nezinto ezinemisebe ebusayo, i-Automotive Fluids (uphethiloli, uwoyela nedizili)
Isebenza kanjani i-Aluminium Electromanegic Induction Sealer Sealing
Inqubo yokufaka uphawu yokufaka induction iqala ngokunikezela ngenhlanganisela esivele igcwaliswe ngomkhiqizo equkethe i-cap-container kumshini wokufaka i-aluminium foil. Isivalo sesivele sine-aluminium foil linuction induction liner efakwe kuyo ngaphambi kokuthi iboshwe esitsheni.
Inhlanganisela ye-cap-container idlula ngaphansi kwekhanda le-seamer, elikhipha inkambu ye-electromagnetic ekhangayo, ngesihambisi esihambayo. Njengoba ibhodlela lidlula ngaphansi kwekhanda le-seamer, i-aluminium foil induction liner induction iqala ukushisa ngenxa yemisinga eddy. Isendlalelo se-wax, okuyisendlalelo sesibili se-induction liner, siyancibilika futhi simuncwe ungqimba oluphezulu kakhulu - ungqimba lwepulpboard boardboard.
Lapho ungqimba lwe-wax luncibilika ngokuphelele, ungqimba lwesithathu (ungqimba lwe-foil aluminium) luyadedelwa esivalweni. Isendlalelo sokugcina se-liner, ungqimba lwe-polymer, sibuye sishise sincibilike odebeni lwesitsha seplastiki. Lapho nje i-polymer seyipholile, isibopho esidaliwe phakathi kwepolymer nesitsha sikhiqiza umkhiqizo ovalwe ngobuso.
Yonke inqubo yokufaka uphawu ayithinti kabi umkhiqizo ongaphakathi kwesitsha. Yize kungenzeka ukuthi ucwecwe lwe-foil lwenzeke ngokweqile oludala umonakalo kusendlalelo sophawu oluholela kuzimpawu ezingalungile. Ukugwema lokhu, i-LPE yenza ukuhlolwa kwekhwalithi ethambile kuyo yonke inqubo yokukhiqiza ye-aluminium foil induction yakho eyenziwe ngezifiso ingasebenza ngemishini yokuthunga.
Ngaphambi kwenqubo yokukhiqiza, senza ukubonisana okunzulu nawe ukuze uqonde kahle izidingo zakho. Lokhu kusiza ekutholeni uhlelo olufanele oludingekayo ukuphatha umkhiqizo othize njengosayizi womshini odingekayo wolayini wokupakisha oqinisekisiwe.